Faraskii 'Hackney Faras' iyo dabeecaddiisii ​​sarraysay | Fardaha Noti
The Faraska Hackney, oo sidoo kale loo yaqaan 'Norflok Trotter', ayaa ka mid ah asalka ingiriiska waana si weyn loogu qadariyo noocyadeeda badan. Magaca noocani wuxuu ka yimid ereyga 'Anglo-Saxon' hnegan, oo macnaheedu yahay deris. Ereygan wuxuu la midoobi lahaa Norman la jabsaday taas oo u iman lahayd inay ka soo farcamaan ereyga Laatiinka ah isleeg. Horeba koox-kooxeedka waxaan ku bilaabi karnaa inaan soo aragno taariikhdiisii ​​hore. Ereyga Hackney horeyba waxaa loogu qoray qarnigii afar iyo tobnaad Ingriiska.
Kuwani waa isku mid Waxay ku sifoobeen wax kasta oo ka sarreeya roodhida ay leeyihiin, sare iyo mid gaar ah. Si hufan ayay uga soo jeeddaa astaantan inuu ka soo minguuriyay naanaysta "Aristocrat of Exhibitions." Ma wax yar ayaan ka sii aqoonnaa?
Taranka Hackney, oo ay ugu mahadcelinayaan dhaqdhaqaaqooda iyo dhaqankooda, ayaa si fiican looga yaqaanaa raadadka sinnaanta, istaagaya qaabka wax qabad. uu waxay la mid tahay aragti wanaagsan oo labbiska, tartanka iyo bandhigga. Sidaa darteed, way fududahay in laga helo maadooyinka sida boodboodka, labiska ama bandhigyada toogashada.
1 Sidee faraska Hackney u eg yahay?
2.1 Imaatinka Tareenka
Sidee faraska Hackney u eg yahay?
Iyada oo dhererkeedu yahay qiyaastii 155 cm, waxaan ku wajahan nahay fardo caqli badan oo aad u olol badan. Waad u sheegi kartaa iyaga inay yihiin fardo xoog badan oo leh qaab iswaafajin ah. Iyaga dhexdiisa ayaa ka muuqda Tartanka cajiibka ah: gaar ahaan gacmahooda kor u taaga oo wax badan gadaal ku dheji, sameynta dhaqdhaqaaq wareegsan. Waa dhaqdhaqaaqan iyaga ka dhigay kuwa caan ka ah adduunka bandhigga sinnaanta.
Waxay leeyihiin madax yar oo xoogaa yara qulqulaya oo leh muuqaal toos ah, halkaas oo laba indhood oo waaweyn lagu habeeyay. Madaxa ayaa loo caleemo saaray dhagaha yaryar, mobilada oo had iyo jeer umuuqda inay heegan ku jiraan. Qoortiisu way dheertahay oo way jajabantahay waxayna u horseedaa garbaha adag iyo laabta ballaaran.
Jidhka noocani waa mid aad u badan is haysta oo si fiican loo sameeyay. Waxay leedahay dhabarka muruqyada, feeraha wareega iyo kuuskuus.
Addimmadeedu waa dhexdhexaad waana lagu dhammeeyay kiisas wareegsan oo adag. Waxa uu leeyahay muruq badan oo dhinacyada hore ah iyo jilibyo dhaadheer oo qaabeysan,
Dhogor xariir leh badiyaa waxay leedahay lakabyo xabadka, feeraha, laabatooyinka mugdiga ah ama laabatooyinka, kan ugu dambeeya ayaa ugu badan. Qarniyadii ugu horreeyay ee jiilka, Tobiano madow iyo midabbo Tobiano midab leh ayaa sidoo kale laga heli karaa, in kastoo maanta ay dabar go'een.
Intii lagu jiray qarniyadii XNUMXaad iyo horraantii XNUMXaad, jubbado midabbo madow leh, xabbad buluug ah iyo xabadka ayaa la doorbiday, oo ku habboon daawashada baabuur. Tusaale ahaan, midabada khafiifka ah sida xabadka, xabadka dahabiga ah, xabadka casaanka ayaa sifiican loo arkay ilaa duhurkii.
Xiiso ahaan, waxaa sidoo kale jira Hackney Ponies (oo leh joog sare oo qallalan oo qiyaastii ah 142 cm.) Oo cagihiisa quruxda badani u eg yihiin fardaha. Dhexdooda, ficilka wareega ah ee loo yaqaan 'trot' ayaa aad loogu dhawaaqaa, maaddaama ay jilbaha kor u qaadayaan oo ay gadaasha dambe ee dhudhunka ku dhejinayaan si ay habluhu jidhka uga hooseeyaan.
Qarnigii XNUMX-aad ee England, kuwa fardaha dhaqdaa waxay umuuqdeen inay xiiseynayaan inay ogaadaan kan ugu fiican uguna fiican faraska. Ujeeddadu waxay ahayd in lagu daboolo majaajillooyinkiisa caanka ah ee Ingiriisiga xayawaanka lagu riixo. Intii u dhaxeysay qarnigan iyo kan soo socda, aasaaska waxaa loo dhigay qaar badan oo ka mid ah noocyada Ingiriiska ee sida wanaagsan loo qadariyo maanta. Dhammaan natiijooyinka shaqada ee soosaarayaasha, kuwaas oo ku guuleystay diiwaanno aad u ballaaran oo ku saabsan noocyada jasiiradda.
Noocii 'Hackney' ayaa sidan oo kale uga dhex kacay Ingiriiska weyn qarnigii XNUMXaad. In kasta oo bilowgii la isticmaali jiray inta badan sida fardaha qabyada ah iyo koorsooyinkaMaanta waxaan ka heli karnaa tiro badan oo ah farsamooyinka fardaha. Waad ku mahadsan tahay waxqabadkeeda.
Faraskii ugu horreeyay ee noocan ah wuxuu ku dhashay Norfolk (England) 1760. Waqtigaas laga bilaabo iyo mahadsanid fardaha lagu ruxruxo ee Norfolk iyo Yorkshire, isbarbardhigyadan cusubi waxay horumarinayeen oo helayeen astaamo u gaar ah ilaa ay ka noqdeen isirkooda.
Ka mid ah awoowayaasha tartanka Hackney dhinaca aabbaha, waan heli karnaa Tartanka Thoroughbred ee khadka Darley Carbeed. Markay ahayd 1797, isboortiga baratanka ayaa si ballaaran loogu dhex daray nolosha Ingiriiska. Mares oo leh nashqadaha noocan oo kale ah ayaa si weyn loo qiimeeyay. Labadaba iyaga iyo maraakiibta faras baakadka kala duwani waxay u adeegsadeen kuwa soo saara si ay u xoojiyaan astaamaha xilligii Hackney.
Waxay noqotay nooc aad u qiimo badan. Waxay ka mid ahayd fardaha koorsooyinka ayaa dumarka laga dhex jecel yahay sababo laxiriira. Laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii XNUMXaad iyo intii lagu jiray qeybtii hore ee qarnigii XNUMXaad, taranka waxaa loo isticmaali jiray faras koore. Sidoo kale aad ayaa loogu qiimeeyaa tartamada orodka hore.
Dhaqdhaqaaqyadooda degdegga ah iyo ficilladooda ayaa ka dhigtay iyaga fardo aad loo jecel yahay. Tani waxay soo saartay taas Daawadayaasha fardaha Waqooyiga Ameerika waxay doorteen isir si ay u horumariyaan tooda astaamaha sifooyinka fudud.
Qarniyadan, bulshada beeralayda ah waxay ka heleen faras waxtar leh nooca loo yaqaan 'Hackney'. Marka lagu daro u adeegida faras koorsada, wuxuu daryeeli lahaa beerta mararka qaarkood.
Markii la alifay jidka tareenka tartankii Hackney wuxuu ku jiray khatar. Dadku waxay bilaabeen inay gartaan inay ka dhaqso badan tahay in tareen lagu safro marka loo eego faraska. Wadada tareenka waxay durba bedeshay shaqadii ay qabteen faras farabadan oo gowracaya. Bixiyeyaal badan ayaa u maleynayay in da'da farduhu ay waligeed dhammaatay oo ay joojiyeen inay qabtaan shaqada taranta. Si kastaba ha noqotee, Bulshada Horsney Horse dhaqso u dhaqaaqay iyo badbaadiyay tartankii Hackney iyadoo laga faa'iideysanayo waxtarkiisa hawlaha kale. Noocani wuxuu kasbaday kuwa raacsan oo u arkay sinnaantan inay yihiin fardo aad u fiican xilliyada firaaqada. Waxay ahayd dhibic wanaagsan oo loo rogay taranka in xilligaas la bilaabay in la soo baxo dhadhanka fardaha farqiga sare leh, oo leh muuqaal wanaagsan. Sababtaas awgeed, qaar ka mid ah kuwa wax yaqaan ayaa diiradda saaray wadadaas. Caannimada British Hackney waxay bilaabatay inay ku faafto adduunka oo dhan.
Waqti dheeri, noocyada ayaa ku koray muunado, helitaanka iyo xoojinta astaamaha in maanta wakiil ka tahay. Si tan loo gaaro, ee Hackney genetics, jinsiyado badan ayaa kaqeyb qaatay isu dhigma. Qaarkood waa: Norfolk iyo Yorkshire fardo fardood, Frisia, Norman, Galloways iyo xitaa Andalusians.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Faraskii 'Hackney Horse' iyo astaamihiisii ​​sare ee dabeecadda
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida macluumaadkan. Waxaan is arkaa aniga oo iskudarsanaya halyeeyo ku saabsan iskudhafkan, horumarinta Dalxiiska Fardooleyda, ka dib markaan dib u eegay dabeecadaha iyo boqolleyda ku duulay dhabarkooda. Dhaqanka fardooleyda ee waddan kasta waa weyn yahay.
Ku jawaab jaime